Steam Deck yadzoka kuzotora Linux gamers kuti isvike 1% | Linux Vakapindwa muropa
Asingasviki mwedzi wapfuura, Valve yakaunzwa su Steam dhizaini. Pakutanga, zvaitaridzika kwandiri kuti mutengo wayo wanga usiri wakaderera chaizvo, uyezve tichifunga kuti unozogumira kumitambo yeSteam yeLinux, asi gare gare takadzidza kuti yaizoshandisa Proton, iyo zvakare inobvumidza mukana wemamwe mazita eWindows, uye , zvinonyanya kukosha, izvo zvakaita sekombuta, saka akasiyana masisitimu anoshanda anogona kuiswa pairi.
Asi maitirwo ezvinhu. Ivo vanofarira mitambo yemavhidhiyo uye vanoda kuzviita paPC sarudza Windows. Vashandisi veMacOS vanotenga makomputa avo kune zvimwe zvikonzero uye vozopedzisira vakanda mimwe mitambo, asi Linux vanhu vashoma. Kudzoka apo iyo Steam chitoro chaive chinhu chitsva, Linux gamers yakarova ... 1%, asi yakadonha munguva pfupi. Zvino, angangoita mavhiki maviri mushure mekuunzwa kweSteam Deck, vakadzokera kumusoro, uye zvakakurumidza kuenderana nekuvhurwa kwerudzi urwu rwehybrid pakati pekoni nePC.
Iyo Steam Deck ichave iripo gare gare gore rino
Sezvatinoona pakati GamingOnLinux, muna Chikunguru Linux vatambi vaive zvishoma pamusoro pe0.8%. Nekuunzwa kweSteam Deck, mutsetse unokwira kumusoro kusvika wasvika 1%, hongu, ichiri chidiki, asi "boom" yakaitika.
Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti chikonzero chekukwira uku ndiko kuratidzwa kweValve koni, ingangoita avo vashandisi vakanyoresa uye vakatanga kutamba paStam yeLinux vakadzoka mushure mekunzwa nhau. Izvo zvinoramba zvichionekwa ndizvo zvinoitika mune ramangwana. Izvo hazvigone kutongwa kunze kuti zvinoitika senge nguva iyoyo, zvirokwazvo ndizvo zvandinovimba zvichaitika, asi kana izvo zvinhu zvachinja zvishoma uye isu tese tinokunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Iyo Steam Deck yadzoka kuzotora Linux gamers ku1%
Ndiri kushamisika pakutanga kwechinyorwa, mutengo wezvainopa ... zvakachipa kwazvo, hazvigoneke kubata chimwe chinhu chakafanana paPC, handisi kutaura nefomu chinhu icho Steam Deck inayo.
Ehezve, izvi ndizvo zvandinoda kureva, kuti ini ndaive ndakanganisa nekuti pakutanga ini ndaifunga kuti yaive console inogumira kune iyo Steam katalog yeLinux, iyo isiri iyo nyaya.
Ini ndaive mumwe wevaya vakadonha ... ini ndaida kuratidza kuti Linux yemitambo yaive ichikura sei .. Uye ndakashamisika kwazvo ..
Iwo madhiraivha emahara eamd akanaka kwazvo uye kuenderana kweproton chimwe chinhu chausina kumbofungidzira kune vashandisi ve linux…. Iyo. Chaizvoizvo, kuravira kwakanaka kwazvo mumuromo mangu kwakandisiya.
WINE 6.15 inosvika neWinSock raibhurari yakashandurwa kuita PE uye ingangoita mazana mana shanduko